Fandrobana isaky ny mahazo vahana ny TGV sy ny baraziny | Hevitra MPANOHARIANA
Mamporisika anao hanoratra foana aho na misy na tsia ny mankasitraka. Tsy manidina fotsiny mantsy ny hevitrao fa misy mijery sy mamaky tokoa raha toy izao!
Nampidirin'i Belle @ 02:01, 2009-03-10 [Valio]
toa nanao denial ny UN hoe i reny malala no miaro ny boay kely
Nampidirin'i simp @ 07:38, 2009-03-10 [Valio]
poinsa ny bekitana zao no nipresy an'io satria lasa otran'ny hoe miandany any @ tgv ny UN... techniquement tsy azon'ny firenena ivelany hatao ny manohana ampahibemaso ny fanoganana fanjakana voafidy demokratikama... plus, ny anglofonina rehetra otran'ny tsy dia mirevy an'lery...
Diavolan-kolava ity rakoto a
Nampidirin'i simp @ 07:42, 2009-03-10 [Valio]
ze mbola tsy tonga saina amizao oa de asa maninn lotra e , efa hita fa reo mitsy no pandroba
Nampidirin'i xxx @ 07:45, 2009-03-10 [Valio]
Misaotra anao mampita vaovao, fa arak'izany dia mbola miasa ara-dalana daholo izany ny mpiasa rehetra ? (Toy ny aminareo ohatra). Tena mahafinaritra ny blaoginao satria dia teny malagasy mazava sady tsy misy diso mihitsy, tsy mifangaro, koa dia mankahery, tohizo hatrany.
Nampidirin'i Olontsotra @ 08:06, 2009-03-10 [Valio]
Misaotra @ fanehoan-kevitra tsy tapaka sady mankahery.. Raha ny fahitako azy olana roa samihafa ny mikasika ny fandrobana (Antony voalohany : Fahantrana, fahefa-mividy, toe-karena sy sosialy…) sy ny Ra8/TGV (Antony faharoa : Politika, fahefana, fitantanana…) Ny mpandroba entana dia avy @ antony voalohany (Jereo Guadeloupe ohatra). Ny mpanao politika kosa na ny andaniny na ny ankilana dia manao izay hahabe mpomba azy ary manao izay hahakly mpomba ny ankilany. Ra8 sy ny mpomba azy dia milaza fa hetsiky ny mpandroba izy ity satria mila ny fiandanian’ny vahoaka @ izy ireo. Andry TGV dia milaza fa mpamono olona sy mpanao didiko fe lehibe ka jereo fa mitraotra ny vahoaka. Matoa misy izao dia misy ny tsy mety eto @ firenena. Manana ny andraikitra sahaza sy tandrify antsika avy isika rehetra amin’izao zava-misy izao. Ny fifampihainoana no fototry ny vahaolana maharitra. Raha olana politika no vahana dia vaha olan politika no sahaza izany. Raha olana ara-toe-karena dia vaha olana ara-toekarena. Raha olana sosialy dia vaha olana sosialy. SA ahoana hoy ianao ? "Ny hevitry ny maro no mahataka-davitra"
Nampidirin'i Malagasy andilam-bato @ 11:15, 2009-03-10 [Valio]
Fika efa lany andro ny anao e! Tsy ketrina ny aty ka tsy mahalala ny oul alefa handroba entina handotona ny fahazaoan'ny TGV vahana raha izay no tianao hambara? Tsy maintsy ho tsarain'ny tantara eny fona, ary ny marina tsy hilevina m/zay fa tsy maintsy mbola hibaribary! Tantara mbola mitohy!
Nampidirin'i ratavao @ 11:16, 2009-03-10 [Valio]
Misaotra @ fanehoan-kevitra tsy tapaka sady mankahery..
Raha ny fahitako azy olana roa samihafa ny mikasika ny fandrobana (Antony voalohany : Fahantrana, fahefa-mividy, toe-karena sy sosialy…) sy ny Ra8/TGV (Antony faharoa : Politika, fahefana, fitantanana…)
Ny mpandroba entana dia avy @ antony voalohany (Jereo Guadeloupe ohatra). Ny mpanao politika kosa na ny andaniny na ny ankilana dia manao izay hahabe mpomba azy ary manao izay hahakly mpomba ny ankilany.
Ra8 sy ny mpomba azy dia milaza fa hetsiky ny mpandroba izy ity satria mila ny fiandanian’ny vahoaka @ izy ireo. Andry TGV dia milaza fa mpamono olona sy mpanao didiko fe lehibe ka jereo fa mitraotra ny vahoaka.
Matoa misy izao dia misy ny tsy mety eto @ firenena. Manana ny andraikitra sahaza sy tandrify antsika avy isika rehetra amin’izao zava-misy izao.
Ny fifampihainoana no fototry ny vahaolana maharitra.
Raha olana politika no vahana dia vaha olan politika no sahaza izany.
Raha olana ara-toe-karena dia vaha olana ara-toekarena.
Raha olana sosialy dia vaha olana sosialy.
Ny hevitry ny maro no mahataka-davitra
Nampidirin'i Malagasy andilam-bato @ 11:18, 2009-03-10 [Valio]
Nifandona ny mpanohana an-dRavalomanana sy ny mpanohitra eo amin'ny 13 mey. rahalina ny andinindininy. Teo Ambatomena sy tohatoha-baton'Antaninarenina no tena nisian'ny fifandonana.
Nampidirin'i jentilisa @ 12:11, 2009-03-10 [Valio]
Sambatra ianao jentilisa mba nohenoin'ny olona ny petrakevitrao izany. Ny ahy ny momba ilay antso ho an'ny kristianina protestanta hoe mila sarahina ny politika sy ny fivavahana amin'ny alalan'ny fialàn'ny Filoha Rasendrahasina sy ny Filoha lefitra Ravalomanana dia tsa misy mihaino.
Malagasy andilam-bato: Izaho irery no milaza fa misy olana ara-pinoana eto, misy hevitra tian'Andriamanitra hampahafantarina izay rehetra milaza azy ho Kristianina. Koa ny ratsy visavisaiko dia hoe niongana hono Ravalomanana, saingy tsy i Andry no nandresy ka nisolo toerana azy fa olon-kafa, lozabe noho izay efa hitantsika hatramin'izay, ka tsy hanageja ny demokrasia fotsiny fa hatramin'ny fahalalahana hivavaka sy hitady an'Andriamanitra no hosakanany.
Ho an'izay kristianina, mba ampio aho hiara-manonona vavaka mangataka an'Andriamanitra mba hiady ho antsika vahoaka, (fa isika kosa hangina), ka Izy no hanatorotoro izay tena ambodia mitafy hodijanakondry marina ka mitondra ny anaran'i Kristy nefa manompo ny maizina, na ny andaniny amin'ny mpifanandrina izany, na ny ankilany, na izy roa mitambatra.
Andro vitsy taorian'ny nanombohako an'izay vavaka izay, toa nahazo aina tampoka teo ny tolona TGV, saingy tsy afaka hilaza aho hoe valimbavaka, satria raha ny hita hatreto aloha dia amin'ny alàlan'ny fampiasan-kery amin'ny fisainana maha-olombelona no isehoan'izay fa tsy miharihary hoe herin'Andriamanitra.
Nampidirin'i DotMG @ 09:08, 2009-03-11 [Valio]
rehefa sasatra nanazimbazimba ny lalam-panorerana ravalo, dia miseho sy miantso ny olona hanaja azy. (mivarotra tanindrazana, mamono vahoaka, ...) Tody tsy misy fa ny atao no miverina.
Nampidirin'i Tidt @ 12:20, 2009-03-12 [Valio]